Xisbiga M oo adkeeyay siyaasaddiisii soo galootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga M oo adkeeyay siyaasaddiisii soo galootiga
La daabacay onsdag 30 december 2015 kl 11.05
M oo siyaasaddiisa qaxootiga bayaaniyay
Elisabeth Svantesson, af-hayeen siyaasadda suuqa shaqada xisbiga M.
Xisbiga Moderaterna ayaa iminka caddeeyay qodob ka mid ah qodobbadiisa adkeeynta ee siyaasadda soo-galootiga ee xisbigu doonayo in la hir-geliyo sidii loo dhimi lahaa qaxootiga dalka soo gala iyo kuwooda soo gala.
Qodobka xisbigu soo ban-dhigay ayaa la xiriira in is-bedel lagu sameeeyo sannadaha uu shaksiga diidmada kama dambeeeysta hela dib ugu dalban karo mar kale lagana dhigo siddeed sannadood halka ay iminka tahay afar sannadood.
– Maadaama ey dad badani dalka dhuumaaleeeysi ku joogaan. Sweden waxaaa ku sugan iminka 22 000 oo ruux oo ay ahayd iney waddammadoodii dib ugu laabtaan. Waxaannuna aamin-sannahey in muddada oo la kordhiyo lagana dhigo siddeed sannadood uu noqon lahaa go’aan macquul ah, maadaama aan loo baahneyn in xeerku hor-seedo in dad badani ey dalka dhuumaaleeysi ugu joogaan, qaasatan xaaladda maanta lagu jiro oo ey dalka soo galeen qaxooti aad u fara badan, isla-markaan qaar badan oo ka mid ahi diidmo ku heli doonaan dalabaadkooda, sida ay shegtay af-hayeeenka dhanka siyaasadda suuqa shaqada ee xisbiga Moderaterna Elisabeth Svantesson.
Xeerka iminka arrinkaa ka deg-san ayaa oranaya in shakhsiga diidmo kama dambeeys ah ku hela dalabkiisa magan-gelyo doon uu mar kale dib u dalban karo afar sannadood dabadeed. Halka uu xisbiga Moderaterna shukaanta u hayay sidii wakhtigaa loo kordhin lahaa, middaasina looga gol leeyahay sidii loo yareeyn lahaa tirada soo-galootiga dalka dhuumaaleeysiga ugu jooga iyagoona rajo ka qaba dalabka dambe oo ey suurtagalka u leeyihiin.
Hayadda socdaalka ayaan tira-koob ka hayn tirada dadyoowga ku dhuumaaleeysaneya dalka ee rajada ka qaba ama sugaya inta laga qaadayo xayiraadda dalabkooda ee afarta sannadood ah. Hase yeeshee uu xisbiga Moderaterna aamin-san yahay in xaaladda uu dalku maanta ku sugan yahay loo baahan yahay in arrinkaa baaritaan lagu sameeyo dabadeedna sharciga wax laga badalo, si loo laba jibbaaro muddada afarta sannadood ah ee xayiraadda diidmada la qaado, isla-markaana la gaarsiiyo 8 sannadood.
- Haddii siddeed sannadood la gaarsiiyo xilliga xayiraadda diidmada la qaadeyo oo shakhsigu mar kale dib u soo cusbooneeysiin karo dalabkiisa magan-gelyo doon waxaa markaa yaraaneeysa rabitaankooda iyo iney dalka ku dhuumaaleeystaan. Dhanka kale waxaa jirta in waddammada qaarkood aannuba jirin suurtagalka ah in dib loo cusbooneeysii-san karo dalabka magan-gelyo doon, waana arrin laga wada xaajoon karo, hase yeeshee loo baahan yahay daaqad yar oo furan xaaladaha qaarkood. Waxaanse loo baahnayn in xeerku horseedo rajo gelin in la dhuumaaleeysto inta uu ka dhammaaneyaan sannadaha xayiraadda si dib loogu soo cosbooneeysiisto dalabkii magan-gelyo doon, sida ay sheegtay Elisabeth Svantesson.
Labada xisbi ee ku bahoobey awoodda dawladda ayaan fikirka xisbiga Mudaraterna aan wax go’aan ah ka qabin iyo in xeerka afarta sannadood wax laga bedelo. Xisbiga Bidixda ee Vänsterpartiet ayaa isagu ku dheggen muddada afarta sannadood ah. Halka uu xisbiga Sverigedemokraterna uu yahay xisbiga keliya ee taabac-san in tallaabadaa mid ka adag lagu tallaabsado iyo inaan qaxootiga diidmada dalka mar ku helay aan la siin suurtagal labaad.
Labada xisbi ee Liberalerna iyo Kristdemokraterna ayaan weli ka arrin-san fikirka xisbiga M, hase yeeshee sheegeen in aanu ahayn fikir ka argagixiya iyo iney jeclaan lahaayeen iney eegaan oo ka baaraan-degaan wax ka bedelka xeerka.
Xisbiga Centerpartiet ayaa aamin-san in muddada afarta sannadood ah ey yihiin kuwo miisaan la saarey xitaa haddii ay jirto halista in dadka qaarkii dhuumaaleeystaan xilliga afarta sannadood si ey dib ugu albadaan dalabkooda magan-gelyo-doon, sida ay sheegtay af-hayeenka xisbiga ee siyaasadda socdaalka Johanna Jönsson.
– Waa wax jira in halista noocaasi ahi ay jiri karto, hase yeeshee midda loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo ayaa ah iney sidoo kale jiraan dadyoowgaasi, waana kuwa sharciga lagu siiyo dalabkooda labaad. Waa dadyoowga aan dalka laga saari karin sababo kala duwan aawadood. Middaasina ugu wacan tahay in waddammadoodii aaney diyaar u aheyn iney qaabilaan. Suurtagal labaad waa iney dadyoowgaasi leeyihiin ama uu u jiraa, sida ay sheegtay Johanna Jönsson.